UTrump uziqhayisa ngenkundla entsha yethenisi, ebe engayinaki inhlekelele ye-Covid | Scrolla Izindaba
UTrump uziqhayisa ngenkundla entsha yethenisi, ebe engayinaki inhlekelele ye-Covid
Uhulumeni waseMelika uthintekile kakhulu ngenxa ye-Covid-19, eyinkinga ebucayi yezempilo yomphakathi kule minyaka eyikhulu futhi ebulala abantu ababalelwa kwizi-3 000 ngosuku.
UMengameli uDonald Trump usebenzisa amasonto akhe asele ehhovisi ethi ulunqobile ukhetho alwehlulwa ngenyanga edlule. NgoMgqibelo ebusuku uhambe waya emhlanganweni wehora lapho izintatheli eziningi ziwuchaze njengehlana elikhulu.
Kodwa ungasho ukuthi abaphathi bakaTrump abenzi lutho. UNkosikazi uMelania Trump ngoMsombuluko wethule itende elisha lethenisi e-White House.
Akumangazi ukuthi lesi simemezelo asigcwalisanga abaseMelika injabulo nentokozo.
Njengoba sekushone abantu abayi-282,000 ngenxa yalolu bhubhane, abayizigidi ezingama-30 balahlekelwe imisebenzi kanti abayizigidi ezingama-29 abanakho ukudla okwanele abakudlayo.
Emasontweni andulela uKhisimusi bazogcinwa ezindlini noma baminyaniswe ezibhedlela, babuke izihlobo zabo esezikhulile zishona njengoba uhlanya lwase-White House lukhafula amanga angenangqondo ngokwengeziwe ngethemba lokuguqula ukhetho.
Umlobi wezincwadi uMolly Jong Fast ubhale ku-Twitter ngoMsombuluko wathi: “La baphathi abenza inhlekelele enkulu yezempilo yomphakathi kulesi sikhathi esiphila kuso, bagxile ekushintsheni udaba mayelana nokhetho nasekuqedeni inkundla yethenisi.”
UTrump njengamanje ulahlekelwe yizinselelo ezingama-44 kwezingama-45 okhethweni, ezinkantolo kanti kwezinye izifundazwe amavoti aphinde abalwa kathathu, konke kwaba nomphumela ofanayo.
Ummeli wakhe ophambili, uRudy Giuliani uhlolwe watholakala ukuthi une-coronavirus ngempelasonto kanti manje usesibhedlela.
I-Washington Post yaxoxa nabantu abangaphakathi e-White House abachaza “uhulumeni othintekayo ngenxa yesenzo sikamengameli; abeluleki abakhuluma izinganekwane zabo; izingxabano phakathi kwamaqembu abasizi nabeluleki; kanye nokufiphala kweqiniso nephupho.”
Okungcono banenkundla yethenisi abazokhiphela kuyo ukucasuka kwabo.